Olee otú Ekekọrịta iTunes Music Library n'etiti Computers, Ọrụ na iOS Devices
Mkpa ịkọrọ gị iTunes music n'ọbá akwụkwọ n'etiti dị iche iche kọmputa, ọrụ akaụntụ ma ọ bụ iOS ngwaọrụ? Ebe a bụ ihe ga-eje ije gị site ndị a niile nsogbu. Lelee na-esonụ ụzọ atọ ịkọrọ gị iTunes music n'ọbá akwụkwọ.
Ọnọdụ 1: Ịkekọrịta n'etiti dị iche iche kọmputa ọnọdụ 2: Ịkekọrịta n'etiti dị iche iche ọrụ akaụntụ ọnọdụ 3: Ịkekọrịta iTunes music n'ọbá akwụkwọ ọ bụla iOS ngwaọrụ
Ọnọdụ 1: Ịkekọrịta n'etiti dị iche iche kọmputa
Ọ bụ nnọọ nkịtị ugbu a ịhụ na ọtụtụ obibi na e nwere abụọ ma ọ bụ ikekwe ihe kọmputa nke oche n'elu ma ọ bụ na laptọọpụ dịgasị iche iche, ndị niile na netwọk ejikọrọ na iji otu modem na Wi-Fi njikọ. Ọ bụ n'ụzọ zuru okè iwu, na ọnọdụ ndị a, ịkọrọ ihe iTunes n'ọbá akwụkwọ nyere akọrọ faịlụ bụ maka ojiji nkeonwe naanị. N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke ntuziaka na ga-agbasoriri iji nweta Music Ịkekọrịta, dabere na niile ngwaọrụ na netwọk iji MS Windows.
Music Ịkekọrịta bụ a mfe usoro ikwe ibe òtù nke a netwọk ịkọrọ music faịlụ. A paswọọdụ ike ga-eji ma ọ bụghị oké mkpa, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ onye malitere nke oboakwụkwọ ebumnuche ịkọrọ ha nile music n'ime netwọk ndị ọrụ.
Nzọụkwụ 1: Open iTunes
Nzọụkwụ 2: Họrọ Dezie> Mmasị
Nzọụkwụ 3: Pịa Ịkekọrịta taabụ. The window gosiri n'okpuru ga-emepe
Nzọụkwụ 4: Họrọ "Ekekọrịta m n'ọbá akwụkwọ na m obodo netwọk"
Nzọụkwụ 5: Ọ bụrụ na i chọrọ, họrọ "-achọ n'Aka paswọọdụ" na-abanye na a paswọọdụ
Nzọụkwụ 6: Pịa OK
Nzọụkwụ 7: Mgbe a na isi ị ga-ahụ a window aka ná ntị na-ekere òkè bụ maka ojiji nkeonwe naanị.
Nzọụkwụ 8: Pịa na Ok ikweta na ị na-anabata ọnọdụ a
Nzọụkwụ 9: Na nke ọ bụla netwọk ngwaọrụ, n'ime iTunes, ị ga-ahụ na-akọrọ iTunes n'ọbá akwụkwọ n'okpuru "nnwekọrịta" nkụnye eji isi mee ka a odo "ụlọ" icon incorporating a music dee akara. Onye ọ bụla na otu netwọk kwesịrị ugbu a-enwe ike ịhụ na nweta gị music.
Nzọụkwụ 10: mara na ọ bụrụ na ị họrọ "-achọ n'Aka paswọọdụ" (na 5 n'elu) ị ga-ahụ a mkpọchi akara ngosi. Ọ nwere ike na-unlocked site na iji ezi paswọọdụ. Ọ bụrụ na ị họrọ "-achọ n'Aka paswọọdụ" na-enweghị paswọọdụ, na ihe niile nwere ike hụrụ bụ gị ọbá akwụkwọ aha
Nzọụkwụ 11: Iji ịtọ gị ọbá akwụkwọ aha, họrọ Dezie> Mmasị. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ na-akọrọ ọba akwụkwọ, jide n'aka na ị họrọ Shared Libraries na General taabụ
Nzọụkwụ 12: ezie ikike nwere ike e nyere maka ndị ọzọ na netwọk na-ele "usu" iTunes n'ọbá akwụkwọ ya ga-emeghe iji n'ihi na ndị ọzọ na-ele na-eji na-akọrọ n'ọbá akwụkwọ na ihe ọ bụla listi ọkpụkpọ ugbu
Ọnọdụ 2: Ịkekọrịta n'etiti dị iche iche ọrụ akaụntụ
Nke a ga-abụ bara uru ebe ị nwere otu PC ma ọ bụ na laptọọpụ na iTunes n'ọbá akwụkwọ na kwesịrị na-akọrọ ndị ọzọ ọrụ na-nwere ohere otu ngwaọrụ ma onye mkpa iji iche iche ozi nbanye. Ihe mbụ na-eme ebe a bụ ịkwụsị iTunes. Wee soro ntuziaka dị ka e gosiri ebe a:
Nzọụkwụ 1: Chọpụta gị iTunes Media nchekwa. (Nke a na nchekwa nwere ike aha ya bụ iTunes Music ọ bụrụ na ị kere gị iTunes ọbá akwụkwọ iTunes 9 ma ọ bụ tupu). Dabere na gị version nke Windows ọ ga-ahụ n'ime otu n'ime ndị a ọnọdụ:
Windows XP na Windows 2000: \_ Documents na Mwube \_ aha njirimara \_ My Documents \_ My Music \_ iTunes
Windows Vista, Windows 7, na Windows 8: \_ Ọrụ \_ aha njirimara \_ Music \_ iTunes
The Windows version nke iTunes adịghị idetuo egwu niile ị tinye gị iTunes n'ọbá akwụkwọ gị iTunes Media nchekwa. Idetuo Music gị ọbá akwụkwọ gị iTunes Media nchekwa (ọ bụrụ na ị na-ezuru ike mbanye ohere), họrọ inokota Library si File> Library> Organise
Nzọụkwụ 2: The iTunes Media nchekwa kwesịrị ugbu a dọkpụụrụ ka a ọha ọnọdụ. Ihe Nlereanya nke ọha nchekwa na ike ga-eji bụ:
Windows XP na Windows 2000: \_ Documents na Mwube \_ All Ọrụ \_ Documents \_ My Music
Windows Vista, Windows 7, na Windows 8: \_ Ọrụ \_ Public \_ Public Music
dị ka n'elu, faịlụ Ọdịdị ike ịdị iche iche otú ahụ ka na-atụ aro ọnọdụ bụ Nhọrọ. Ọ dị mkpa ị na-adịghị akpali ndị iTunes nchekwa, na iTunes n'ọbá akwụkwọ faịlụ, ma ọ bụ iTunes library.xml faịlụ.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a emeghe iTunes omume
Nzọụkwụ 4: Pịa na Dezie> Mmasị
Nzọụkwụ 5: Pịa Advanced
Nzọụkwụ 6: Pịa ịgbanwe button
Nzọụkwụ 7: Na ịgbanwe Music nchekwa ebe dialog, ịnyagharịa gị iTunes Media nchekwa
Nzọụkwụ 8: Pịa OK
Nke niile dị n'elu nzọụkwụ kwesịrị-ugboro ugboro n'ihi na ọ bụla onye ọrụ na kwesịrị ịkọrọ ndị music n'ọbá akwụkwọ
Ọ bụ ekwe omume ike oyiri songs mgbe ọzọ ọrụ Mbubata tracks maka ihe atụ, a CD mgbe ndị a tracks ama adị ke n'ọbá akwụkwọ. Ke idaha duplicates nwere ike mfe ehichapụ
Ọnọdụ 3: Ịkekọrịta iTunes music n'ọbá akwụkwọ ọ bụla iOS ngwaọrụ
Ka na-ekwu, ihe atụ, na ị chọrọ ịkọrọ ihe iTunes music n'ọbá akwụkwọ ugbu a nọ ọdụ na PC gị na n'etiti dị iche iche iOS ngwaọrụ dị ka iPad, iPod Touch na iPhone. Nke a bụ n'ụzọ zuru okè ga-ekwe omume na ihe niile i nwere ime bụ na-eso ole na ole dị mfe ntuziaka. N'ezie, ya na ezi n'ụlọ Wi-Fi usoro i nwere ike enuba dum ọdịnaya nke gị ọbá akwụkwọ ọzọ ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla waya njikọ.
Home Ịkekọrịta nwere na-melite na PC gị na mbụ niile na ị ga-arịba ama na iTunes version 10.2 ma ọ bụ mgbe e mesịrị a chọrọ ma ọ bụrụ na ihe ịga nke ọma gụgharia nke oboakwụkwọ bụ na-enweta. Ndị ọhụrụ bụ iTunes version 11 otú ntụziaka ndị a iche na a ọhụrụ version bụ na ebe na usu PC.
Nzọụkwụ 1: Open iTunes na PC
Nzọụkwụ 2: Họrọ File> Home Ịkekọrịta> Tụgharịa na Home Ịkekọrịta
Nzọụkwụ 3: Tinye Apple ID na paswọọdụ ejikari ka ịnweta iTunes Store, wee pịa Mepụta Home Share. Otu Apple ID a chọrọ maka ma PC na iOS ngwaọrụ
Ozugbo Home Ịkekọrịta a guzobere na PC na ị chọrọ ka ọ na-elu na ngwaọrụ ọzọ. Ndị na-esonụ ntụziaka gbasa mwube music nkekọrịta na iPhone5:
Mgbata Ntọala> Music
Na Home Ịkekọrịta ngalaba, itinye otu Apple ID na paswọọdụ ị banyere na kọmputa gị (ma ọ bụ kọmputa) na enweta na nloghachi button
Ị nwere ike mgbe ahụ, ihe atụ, na-akpọ n'ụlọ nkekọrịta music ọdịnaya na gị iPhone ka ndị a:
Mgbata Music> More ...> nnwekọrịta
Họrọ a na-akọrọ n'ọbá akwụkwọ
Ọ bụrụ na niile a guzobere n'ụzọ ziri ezi na-akọrọ music n'ọbá akwụkwọ nwere ike inweta na họrọ tracks ma ọ bụ albums ga-akpọ ka nkịtị.
8 Ụzọ dezie iTunes Music Library
> Resource> iTunes> ụzọ atọ ịkọrọ gị iTunes Music Library